के तपाईंलाई गर्मी मौसममा चुकन्दर खानुका यी फाइदाहरु थाहा छन ? | सुदुरपश्चिम खबर
के तपाईंलाई गर्मी मौसममा चुकन्दर खानुका यी फाइदाहरु थाहा छन ?
गर्मी मौसममा चुकन्दर खाँनु स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसले बिग्रिएको छालालाई सफा बनाउने, रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढाउने आदि काम गर्छ । यसका अन्य फाइदाहरुःःपोषक तत्व ीचुकन्दरमा लगभग सबै प्रकारका भिटामिन र मिनरल पाइन्छन् ।
मुटु रोगीका लागि ःचुकन्दरको जुस हरेक दिन पिउँदा कार्डियोभास्क्युलरसम्बन्धी रोगहरुको खतराबाट बच्न सकिन्छ । यसमा हुने नाइट्रेट, नाइट्रेट अक्साइडमा परिवर्तन भएर र रक्तनलीहरुलाई सफा गर्ने गर्छ । जसले रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्छ । साथै, हृदयघात हुने र जस्ता खतरा स्ट्रोक कम गर्छ ।
मस्तिष्कको कामःचुकन्दरमा हुनेले पदार्थले रगत प्रवाहमा सन्तुलन ल्याउने कारण मस्तिष्कको काम पनि तन्तुरुस्त बनाउँछ । क्यान्सरःचुकन्दरमा हुने बिटालेन्स नामक पदार्थले शरीरमा अस्थिर सेलहरुलाई मार्ने काम गर्छ । चुकन्दरमा हुने एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टिइनफ्लामेन्टरी र पोषक तत्वहरुले क्यान्सरको उपचारमा समेत सहयोग पुर्याउँछ ।
कलेजो र पेटको सफाइःचुकन्दरले पेट र कलेजोको सफाइ गर्छ । उर्जावानःचुकन्दरले शरीरमा रगतको प्रवाह र अक्सिजनको प्रवाह सन्तुलन गर्ने भएकाले यसको जुस सेवन गर्नाले दिनभर ताजा र उर्जावान महसुस गराउँछ ।
तौलःयसमा कुनै पनि प्रकारको क्यालोरी नहुने भएकाले यसले तौललाई नियन्त्रण गर्न पनि मद्दत गर्छ । सुन्दर छालाःचुकन्दरमा भिटामिन सी, भिटामिन बी जस्ता तत्व पाइने भएकाले यसले उमेरसँगै देखिने छालाका विभिन्न समस्याहरुबाट बचाउँछ । र छालामा आउने विभिन्न प्रकारका समस्याहरुबाट पनि बचाउँछ । (gnewsnepal बाट सभार)
शिक्षाको समग्र विकासका लागि गुरुयोजना ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन !!